Cancala Dhangii - Arfii - Bocquufili
Baafata halqaraa bani iraantoo tarree gabtee kuusaa deetaa keessaa bani -Cancala - Gabateefili
Cancala(Galmeelee Taattoo)Dhangii - Matadure - Arfiifili
Cancala(Galmeelee Taattoo)Dhangii - Waayoofili
Cancala(Galmeelee Taattoo)Dhangii - Siiqqee - Arfiifili
Cancala(wardiilee)Dhangii - Mandee - Bocquu fili
Qinda'ina afaan kee irratti hundaa'uudhaan dhaangeessuu akkaakuuwwan bocquu armaan gadiittif jijjiiruu ni dandeessa.
Bocquu barruu Dhihaa - arfiin laatiini qindaa'e.
Bocquu barruu Eshiyaa - Chaayinaa Jaappan ykn arfiin Kooriyaa qindda'e.
Bocquu teessuma barruu walxaxaa - kallattii barruu mirgaa gara bitaatin
Haalata halata biroo irratti hunda'ee gattidhibbeentaa ykn gita qabxii(fakkeenya, -2pt ykn).
Afaan too'ataan qubeeffannoo barruufilatameeef barreessituu qinddeessa. Muraawwan afaan jireessaa mallattoo fillannoo fuuldura isaanitti qabu.
Deegarsa teessuma barruu xaxaa